Raha tsiahivina, tsy fanekena ny fandaniana amboletra ny lalàm-pifidianana saika ho hampiharina tamin’ity taona ity no nihatombohan’ny savorovoro ka nahatapa-kevitra azy ireo hanao tatitra amin’ny vahoaka eny an-kianja nanomboka ny 21 aprily teo. Tsy takona afenina tao anatin’izay anefa fa nifotorana kolikoly sy ampihimamba maro ny fikirizam-bibin’ny fitondrana nandany izany lalàna izany ary dia io izy izao miafara amina fitakiana ankolafy maro ny fametraham-pialan’ny filoham-pirenena io. Mipoitra tsikelikely avy amin’izany ankolafy isan-karazany izany koa ankehitriny ireo karazana tolo-bahaolana heverina tsy hampiverina ny krizy sy irosoana any amin’ny fiainana tsaratsara kokoa amin’izay. Vahaolana ary ve ny firosoana amin’ny fifidianana sa mila manangan-drafitra sy lalàmpanorenana vaovao aloha ? Raha ilay safidy faharoa dia toa midika avy hatrany fa mila miroso amina tetezamita sy fifampidinihana maro samihafa koa izany. Raha hirosoana kosa anefa ilay voalohany dia sarotra ny tsy hiahiahy fa mbola hiverina indray ny kisarisary toy ny efa nisy hatramin’izay. Izany hoe, aorian’ny fifidianana dia mety hisy filoham-pirenena vaovao ratsy fidy indray (mal élus) ka mbola hampiverina fidinana an-dalambe sy ra mandriaka. Hiankinana fiovana maro noho izany ny tolon’ireo depiote 73.